आइसिसी क्रिकेट : कस्ले मार्ला बाजी ! - Sabaithari.com
आइसिसी क्रिकेट : कस्ले मार्ला बाजी !
अष्ट्रेलियालाई ८ विकेटले हराउँदै घरेलु टिम इंग्ल्यान्ड आइसिसी क्रिकेट विश्वकप २०१९ को फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । इंग्ल्यान्ड सन् १९९२ पछि पहिलो पटक पाँच पटकको विजेता अष्ट्रेलियालाई हराउँदै विश्वकपको फाइनलमा पुगेको हो।
इंग्ल्यान्डको उपाधि भिडन्त आइतबार न्युजिल्यान्डसँग हुनेछ । गत संस्करणको उपविजेता न्युजिल्यान्डले बुधबार भारतलाई पराजित गर्दै फाइनल यात्रा तय गरेको हो ।
इंगल्याण्ड वा न्युजिल्याण्ड जसले जिते पनि यसपटकको क्रिकेट विश्वकपमा नयाँ विजेता हुनेछन् । यसअघि इंग्ल्यान्ड तीन पटक फाइनलमा पुगेर उपाधिविहीन बनेको थियो भने न्युजिल्यान्ड गत संस्करणमा उपविजेतामै सीमित बनेको थियो ।